ကွယ်လွန်သူအတွက်ဆုတောင်းခြင်း။ ? နှစ်ပတ်လည်၊ ချစ်လှစွာသောကွယ်လွန်သူနှင့်လှသည်
ကျွန်ုပ်တို့အများစုဒုက္ခခံစားခဲ့ရသည်မှာသေချာသည် သေခြင်း အလွန်နီးကပ်သူတစ် ဦး ၏မိသားစုဝင်သို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းဖြစ်ခြင်းသည်အရေးမကြီးပါ။ အရေးကြီးသည်မှာသူသည်ဤကမ္ဘာတွင်မရှိတော့သောကြောင့်သူသည်ကျော်။ သွားခဲ့သည်။
သို့သျောလညျး, ဒီယုံကြည်ချက်မကြာခဏပြန်လည်နားမလည်ခြင်းနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာနည်းသောသူတို့ကဝေဖန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုသန့်ရှင်းအောင်ဤနည်းဖြင့်မကြားရပါ။
1.1 ကွယ်လွန်သွားသောချစ်ရသူတစ် ဦး အတွက်ဆုတောင်းပါ
1.4 ကွယ်လွန်သွားသောမိသားစုဝင်များအတွက်ဆုတောင်းခြင်း (ကက်သလစ်)
များသောအားဖြင့်သေဆုံးသွားသောသူကိုသင်္ဂြိုဟ်ပြီးနောက်အချို့သောဆုတောင်းခြင်းများကိုပြုလုပ်လေ့ရှိသည်၊ သို့သော်ယင်းတို့ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်မလုံလောက်ပါ ပဌနာ အချိန်ကြာမြင့်စွာပင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစု ၀ င်သို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းအားကာယပိုင်းခွဲခြားခြင်းအတွက် ၀ မ်းနည်းပူဆွေးခြင်းနှင့်နာကျင်စေခြင်းအတွက်အထောက်အကူပြုသည်။
ကွယ်လွန်သွားသောချစ်ရသူတစ် ဦး အတွက်ဆုတောင်းပါ
အိုဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်သည်အသက်၏တစ် ဦး တည်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်သည် ၀ ိညာဉ်အတွက်အသနားခံချင်ပါသည် (ကွယ်လွန်သူ၏အမည်) အဘယ်သူကိုသင်၏အနားမှာအနားယူရန်ခေါ်တော်မူ။
သငျသညျဆရာအဘို့, ဒီဆုတောင်းပဌနာမြှင့်, အဆိုးဆုံးမုန်တိုင်းများပင်လျှင်သင်အဆုံးမဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနေသောကြောင့်။ ထာဝရအဘ၊ ဤ ၀ ိညာဉ်ရေးရာမှထွက်ခွာသွားသူများအားသင်၏စိတ်နှလုံးနှင့်နိုင်ငံတော်၏ပရဒိသုတွင်ငြိမ်ဝပ်စွာနေတော်မူပါ။
စိတ်မကောင်းစရာမဟုတ်တော့သူတစ် ဦး ၏ထွက်ခွာသွားမှုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရသူများ၊ သင်၏နှလုံးသားကိုဖွင့်ဟပြီးသူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်ဖက်တွယ်ထားသူများအားလုံးဖခင်ကိုလည်းကျွန်ုပ်အားတောင်းပန်ပါ၏။ ဖြစ်လတံ့သောအရာတို့ကိုနားလည်စေခြင်းငှါ၊
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ၊ ဒီအချိန်မှာမရှိသူများကိုငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေရန်ဆုတောင်းပဌနာစကားကိုယနေ့နားထောင်ပေးရင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မထွက်နိုင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မျိုးစေ့ကြဲခြင်း၊ နက်ဖြန်နေ့၌အခြားသူတစ် ဦး သည်ထိုနည်းတူကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြုလုပ်ပေးလိမ့်မည်။
သခင်ယေရှု၊ ထာဝရနာကျင်မှုဝေဒနာခံစားရချိန်၌တစ်ခုတည်းသောနှစ်သိမ့်မှု၊ သေခြင်းတရားသည်ချစ်ရသူများကြားတွင်ကြီးမားသောအနတ္တသက်သက်အတွက်သာနှစ်သိမ့်မှုပါ။
ကောင်းကင်၊ မြေကြီး၊ လူတို့မြင်။ စိတ်မသာညည်းတွားသောသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်စေတော်မူပြီ။
ချစ်မြတ်နိုးရသည့်မိတ်ဆွေတစ် ဦး ၏သင်္ချိုင်းဂူအပေါ်ချစ်ခင်တွယ်တာမှုအရှိဆုံးသောစိတ်ဆန္ဒများကိုကြွေးကြော်နေသောသခင်ဘုရား၊
သူတို့ကိုကြည့်ရှုတော်မူပါ၊ နာကျင်မှုဝေဒနာခံစားရသည့်စိတ်၏သွေး၊ အချစ်ဆုံး၊ သစ္စာရှိမိတ်ဆွေ၊ ထက်သန်သောခရစ်ယာန်တစ် ဦး ၏ဆုံးရှုံးခြင်းအတွက်သူတို့ကိုကြည့်ရှုပါ။
ထိုအရာတို့ကိုကြည့်ရှုတော်မူပါဘုရား။ ထိုအရာကိုသင်၏စိတ်ဝိညာဉ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ပူဇော်သောအခွန်အဖြစ်ခံယူတော်မူပါ။ သို့မှသာထိုအရာကိုသင်မွေ့လျော်နိုင်ပါက၎င်းကိုသင်၏အဖိုးထိုက်သောအသွေးတော်အားဖြင့်သန့်ရှင်းစေပြီး၊
စိတ်ဝိညာဉ်ကိုညှဉ်းဆဲသောကြီးမားသောဤစမ်းသပ်မှု၌ကျွန်ုပ်တို့အားခွန်အား၊ သည်းခံခြင်း၊ သင်၏ဘုရားသခင့်အလိုတော်နှင့်ညီညွတ်မှုရှိစေရန်သူတို့ကိုကြည့်ရှုတော်မူပါ။
သူတို့ကိုကြည့်ပါချစ်ခင်ရပါသောသခင်၊ မြေကြီးပေါ်ရှိသူများသည်အလွန်ခိုင်မာသောချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုနှောင်ကြိုးများနှင့်ဆက်နွှယ်နေပြီးသူတို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ချစ်ရသူမရှိခြင်းအတွက်စိတ်မသာညည်းတွားခြင်းဖြင့်သင်၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်ထာဝရစည်းလုံးညီညွတ်စွာနေထိုင်ရန်ကောင်းကင်ဘုံ၌သင်နှင့်ထပ်မံတွေ့ဆုံရသည်။
ငါတို့မေးတယ် မိမိအစဉ်အမြဲငြိမ်ဝပ်စွာနေခြင်းအဘို့သို့ ငြိမ်းချမ်းရေးရနိုင်ပါစေ မင်းဘာလိုအပ်လဲ
အထူးသဖြင့်နာကျင်မှုနှင့် ၀ မ်းနည်းမှုတို့ကြောင့်စကားလုံးများထွက်မလာသည့်အချိန်များတွင်လမ်းညွှန်မှုဖြစ်စေသောဆုတောင်းချက်များရှိပါသည်။
အလွန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပြည့်စုံ။ သင်တို့ကိုချစ်တော်မူသောယေရှု၊ ငါတို့သည်သင်တို့၏အသနားခံရာ၊ ထာဝရမင်္ဂလာရှိစေခြင်းငှါ၊ infinito Amore ။
ထာဝရငြိမ်ဝပ်စွာ နေ၍ အစဉ်အမြဲခံရသောအလင်းသည်ထိုသူတို့ကိုလင်းစေ။ ၊
အကယ်၍ သင်သည်မိသားစု ၀ င်တစ် ဦး အားသင်ဆုတောင်းလိုပါကသေလွန်သူများအတွက်မှန်ကန်သောဆုတောင်းချက်ဖြစ်သည်။
အရေးကြီးသောနေ့ရက်တွင်သေဆုံးသွားသောမိသားစုဝင်တစ် ဦး သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတစ် ဦး ကိုသတိရခြင်းသည်များသောအားဖြင့်မလွှဲမရှောင်သာဖြစ်သည်။
ဖြစ်နိုင်သည် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်, မင်္ဂလာဆောင်သို့မဟုတ်အချို့ နောက်ထပ်အရေးကြီးသောနေ့စွဲ.
ဤအရာအားလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးအရာက၎င်းကိုမေ့ပျောက်။ သင်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိပါစေမတောင်းရန်ဖြစ်သည် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တိတ်ဆိတ်ရှိစေခြင်းငှါ နှင့် မွကွေီးလေယာဉ်ပေါ်တွင်ကျန်ကြွင်းသောသူတို့ကိုခိုင်ခံ့စေဖို့ဆက်လက်.
တစ်ခါတစ်ရံ၊ အခြားမိသားစု ၀ င်များနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းနှင့်အိမ်မှုကိစ္စများတွင်ဆုတောင်းခြင်းများပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်ကလူနှစ် ဦး သုံး ဦး သည်ယေရှုကိုယ်စားတောင်းလျှောက်ရန်စိတ်သန်လျှင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောခမည်းတော်သည် တောင်းဆိုချက်
ဘုရားသခင်၊ အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ပြီးလူတို့၏ကယ်တင်ခြင်းကိုလိုလားတော်မူသောဘုရားသခင်၊ လောကမှထွက်ခွာသွားသောကျွန်ုပ်တို့၏ညီအစ်ကိုများနှင့်ဆွေမျိုးများ၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သင်၏ကရုဏာကိုအသနားခံပါသည်။
ကွယ်လွန်သူအတွက်ဆုတောင်းခြင်းသည်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းအနီးရှိရှေးအကျဆုံးအစဉ်အလာတစ်ခုဖြစ်သည် el Mundo၎င်းသည်ကွယ်လွန်သူကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်၎င်းတို့အားသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်သောနေရာတွင်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ရန်အယူဝါဒတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
မိသားစုလိုက်အတူတကွစုဝေးပါ ကွယ်လွန်သွားသောမိသားစု ၀ င်တစ် ဦး အတွက်ဆုတောင်းခြင်း (သို့) မိတ်ဆွေများ၊ အခြားမိသားစုဝင်များနှင့်အတူတကွအထူးဆုတောင်းချက်များ၊ ဆုတောင်းချက်များပြုလုပ်နိုင်သည့်နေရာတစ်ခုကိုဆုတောင်းရန်ထုံးစံရှိသည်။
ဒါကနှစ်သိမ့်မှုဖြစ်စေတယ်၊ ​​ငါတို့မိသားစုကိုမမေ့သေးဘူး၊ အတူတကွပြန်ဆုံကြမယ်ဆိုတဲ့နိမိတ်လက္ခဏာ။
သေလွန်သူများကိုဆုတောင်းခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာထိုအရာဖြစ်သည်။ ငါတို့တွင်မရှိတော့သောသူကိုအကူအညီ၊ အကူအညီ၊ ကာကွယ်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုတောင်းခံပါ။